हाल इन्टरनेटमा भाइरल भैरहेको यो जोडीको तस्बिर, वास्तवमा को रहेछन उनीहरु ? जान्नुहोस (फोटो सहित) - www.kchhakhabar.com
हाल इन्टरनेटमा भाइरल भैरहेको यो जोडीको तस्बिर, वास्तवमा को रहेछन उनीहरु ? जान्नुहोस (फोटो सहित)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भाद्र २०, २०७४ समय: १४:०२:२८
मुम्बई, १७ भदौ । हिजो आज सोसियल मिडियामा एक अत्यन्तै कालो वर्णको केटा र राम्री सेतोवर्णको केटीको फोटो भाइरल भैरहेको छ । फेसबुकमा मात्र हैन यी दुइको फोटो ट्वीटर, व्ह्वाट्सएप मा पनि उत्तिकै भाइरल भैरहेको छ ।
यो जोडीको फोटोलाई लिएर धेरै मानिसहरुले खिल्ली उडाइरहेका छन, उनीहरुको जोडी पटक्कै नमिलेको बताईरहेका छन । तर ति युवकको छालाको रङमा नजानुहोस उनि कुनै साधारण मानिस भने हैनन् । उनि हुन् मुभी डाइरेक्टर र स्क्रिनप्ले राइटर एटली कुमार । उनले निक्कै राम्रो बजार गरेको तमिल फिल्महरु निर्देशन गरिसकेका छन ।
कुमारले बलिवुड हस्ती निर्देशक एस शंकरसंग पनि ५ वर्षा सम्म काम गरिसकेका छन । उनले निर्देशन गरेका तमिल फिल्म ‘राजा रानी’ ले करिब ५०० मिलियन भन्दा बढी कमाइ गरेको थियो ।
को हुन् युवती चाहि ?
फोटोमा देखिएकी युवती हुन् कृष्ण प्रिया । उनि पनि टेलिभिजन अभिनेत्री हुन् । उनले धेरै टिभी सिरियलमा अभिनय गरि सकेकी छिन् । सानो पर्दामा मात्र नभई उनले दक्षिण भारतीय फिल्म ‘सिंघम’ मा पनि अभिनय गरिसकेकी छिन् ।
यो त भयो उनको परिचय तर यी युवती र ति कालोवर्णको युवक एटली कुमार बीच के सम्बन्ध होला ? वास्तवमा उनीहरु श्रीमान श्रीमती हुन्, उनीहरुले ८ बर्ष लामो लब अफेयर पश्चात बिबाह बन्धनमा बाधिएका हुन् । उनीहरुले मे २०१४ मा नै बिहे गरेका थिए भने उनको बिबाहमा दक्षिण भारतीय मुभी स्टारहरु पनि सरिक भएका थिए ।
यस अगाडी पनि बंगलादेशी नायक अलोम उर्फ अशरफुल आलम सईद र नायिकाको फोटो पनि यसै गरि भाइरल बनेको थियो ।